Pfizer-BioNTech COVID-19 akwadoro maka ụmụaka 5-11 maka ihe mberede.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Pfizer-BioNTech COVID-19 akwadoro maka ụmụaka 5-11 maka ihe mberede.
Taa, nchịkwa nri na ọgwụ US nyere ikike iji ihe mberede nke Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine maka mgbochi COVID-19 gụnyere ụmụaka dị afọ 5 ruo 11. Ikike a dabere na nyocha nke ọma na nke doro anya nke FDA nke gụnyere ntinye sitere n'aka ndị ọkachamara kọmitii ndụmọdụ nọọrọ onwe ha bụ ndị kwadoro oke ntuli aka maka ime ka ọgwụ ahụ dịịrị ụmụaka nọ n'ọgbọ a.
Isi ihe maka ndị nne na nna na ndị nlekọta:
• Ịdị irè: Nzaghachi mgbochi ọrịa nke ụmụaka 5 ruo afọ 11 dị ka nke ndị mmadụ 16 ruo 25 dị afọ. N'ime ọmụmụ ihe ahụ, ọgwụ mgbochi ahụ dị 90.7% dị irè iji gbochie COVID-19 n'ime ụmụaka 5 ruo 11.
• Nchekwa: A mụrụ nchekwa ọgwụ mgbochi ahụ n'ihe dịka ụmụaka 3,100 nọ n'afọ 5 ruo 11 bụ ndị natara ọgwụ mgbochi ahụ ma ọ nweghị mmetụta dị njọ achọpụtala na ọmụmụ ihe na-aga n'ihu.
• Kọmitii Ndụmọdụ gbasara Mgbochi Ọrịa na Mgbochi Ọrịa (CDC) ga-ezukọ n'izu na-abịa iji kparịta aro ndị ọzọ gbasara ahụike.
“Dị ka nne na dọkịta, amaara m na ndị nne na nna, ndị nlekọta, ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ, na ụmụaka anọwo na-eche ikike taa. Ịgba ụmụaka ọgwụ mgbochi megide COVID-19 ga-eme ka anyị bịaruo nso ịlaghachi n'echiche nke ịdị adị, "Onye na-ahụ maka FDA Janet Woodcock, MD kwuru, "Ntụle zuru oke na nke siri ike nke data gbasara nchekwa na ịdị irè nke ọgwụ mgbochi kwesịrị inye aka mee ka obi sie ndị nne na nna na ndị nlekọta. na ọgwụ mgbochi a kwekọrọ n'ụkpụrụ anyị dị elu."
A na-enye ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 maka ụmụaka dị afọ 5 ruo afọ 11 dị ka usoro usoro izizi ụzọ abụọ, izu atọ dị iche, mana ọ bụ obere dose (micgram 3) karịa nke a na-eji maka ndị dị afọ 10 gbagoro agbago. (12 micrograms).
Na US, ikpe COVID-19 n'ime ụmụaka dị afọ 5 ruo 11 mejupụtara 39% nke ikpe n'ime ndị na-erubeghị afọ 18. Dabere na CDC, ihe dị ka ikpe 8,300 COVID-19 n'ime ụmụaka 5 ruo afọ 11 butere ụlọ ọgwụ. Ka ọ dị na Ọkt. 17, 691 ọnwụ sitere na COVID-19 ka akọpụtala na US n'ime ndị na-erubeghị afọ 18, yana ọnwụ 146 n'ime otu afọ 5 ruo 11.
"FDA gbalịsiri ike ime mkpebi ndị sayensị na-eduzi nke ọha na eze na ahụike nwere ike ịtụkwasị obi. Anyị nwere obi ike na nchekwa, ịdị irè na data nrụpụta n'azụ ikike a. Dị ka akụkụ nke nkwa anyị na nghọta n'akụkụ mkpebi anyị, nke gụnyere nzukọ kọmitii ndụmọdụ ọha na eze na mbụ n'izu a, anyị ezipụla akwụkwọ taa na-akwado mkpebi anyị na ozi ndị ọzọ na-akọwa nleba anya nke data anyị ga-ebipụ n'oge na-adịghị anya. Anyị nwere olile anya na ozi a na-enyere aka wulite ntụkwasị obi nke ndị nne na nna na-ekpebi ma a ga-agba ụmụ ha ọgwụ mgbochi,” ka Peter Marks, MD, Ph.D., onye isi ụlọ ọrụ FDA's Center for Biologics Evaluation and Research kwuru.
FDA ekpebiela na ọgwụ mgbochi Pfizer a ezutewo ụkpụrụ maka ikike iji ihe mberede mee ihe. Dabere na mkpokọta ihe sayensị sayensị dị, uru ama ama yana uru nke ọgwụ Pfizer-BioNTech COVID-19 n'ime ndị mmadụ ruru afọ ise karịrị ihe egwu ama ama yana enwere ike.